विश्वलाई हल्लाउने यी दश चर्चित फोटो (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्वलाई हल्लाउने यी दश चर्चित फोटो (फोटोफिचर)
एजेन्सी। विश्वमा यस्ता कति फोटो होलान् जुन निकै चर्चिच भए? चाहे ती भियतनाम युद्धका बेला ज्यान जोगाएर भाग्ने बालकको फोटा होस् वा सुडानमा कुपोषण र भोकमरीले ग्रस्त बालकको पछि बसेको गिद्धको फोटो नै किन नहोस्। त्यही भएर भनिन्छ, की एउटा फोटो हजार शब्द भन्दा शक्तिशाली हुन्छ।
आज हामी तपाइँलाई आज्ञाको उल्लघंन (डिफिएन्स) गर्दै गरेका दश फोटोका विषयमा जानकारी दिन गइरेका छौं जुन फोटोले विश्वभरमा निकै चर्चित भए।
लेशिया इवांस ती १०० जनामा थिइन् जो ब्याटन रुजमा ३७ वर्षीया एल्टन स्टेरलिंगको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेकी थिइन्। यो क्रममा प्रदर्शनकारीलाई रोक्नकालागि त्यहाँ ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो। यो क्रममा लेशिया प्रहरी भएको ठाउँमा पुगिन् र विरोध प्रदर्शन गर्न थालिन्। त्यही बेला खिचिएको यो फोटोले विश्वमा निधै चर्चा पाएको थियो।
नेशनल ज्योग्राफिकका फोटोग्राफर स्टीव म्याककरीले यो ऐतिहासिक फोटोलाई खिचेका थिए। जुन फोटो ९० को दशकमा निकै यादगार फोटो भयो। यो फोटो १९८५ जुनमा खिचिएको थियो। जुन अफगानी शरणार्थी युवतीको थियो। उनको नाम शर्बत गुला हो।
२०१० मा यो फोटोको पहिचान ब्रिटिश बन्दी होरेस ग्रीस्लेको रुपमा भयो। जो क्याम्पमा हेनरिक हिमलरको निरीक्षणका क्रममा उनका अगाडि आँखाँ जुधाएर उभिएका थिए। ग्रीस्ले एक अर्को एक चिजका लागि पनि प्रख्या थिए। उनी यो क्याम्पबाट करिव २०० पटक आफ्नी जर्मन गर्लफ्रेण्ड रोजासँग भेट्न फरार भएका थिए। इतिहासकार तथा लेखक गाय बाल्टरका अनुसार यो फोटो बेलारुसको मिनस्कमा खिचिएको थियो। यसको विषय ग्रीस्ले होइन, उनले लगाएको टोपी हो।
फ्रेन्च फोटोग्राफर मार्क गरेंजर सेनासँग सानो पहाडी गाउँ कबिलियामा थिए। त्यतिबेला उनले त्यहाँ रहकी एक अल्जेरियन महिलाको फोटो खिचे। जसले आफ्नो अनुहार बुवा, भाइ र श्रीमानलाई मात्र देखाउन सक्थिन्। दुवै देशको युद्धपछि निकै समयसम्म फ्रान्सले अल्जेरियामाथि राज गरेको थियो। यो फोटोलाई प्रतीकको रुपमा प्रयोग गरियो।
विश्वका रंगभेदको कहानी नयाँ विषय होइन। १९५४ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले श्वेत र अश्वेत बच्चालाई सँगै पढाउने आदेश दियो। त्यो फोटो त्यतिबेला खिचिएको हो, जतिबेला एक अश्वेत बालिका रुबी ब्रिजेज स्कुलबाढ पढेर बाहिर निस्किरहेकी थिइन्। रुबीको सुरक्षाकालागि कार्ड पनि सँगै थिए। किनभने स्कुल बाहिर प्रदर्शन जारी थियो।
सन २०१६ मा ‘एन्टी–अवर्शन ल’ लाई लिएर निकै ठूलो प्रदर्शन भयो। लामो समयसम्म महिलाहरुले अवर्सनलाई लिएर प्रदर्शन गरिरहेका थिए। २०१६ मा पोल्याण्ड सरकारले अवर्सनमाथि रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो। जसको विरोधमा पूरै देशभरी प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनका क्रममा यी बृद्ध महिलाले यो तस्वीर खिचाएकी थिइन्। जुन पूरै विश्वमा चर्चित भयो।
शीत युद्धका क्रममा उत्तर कोरियाली सैनिकले अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस प्यूब्लोलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। अमेरिकाले जल सीमाको उल्लंघ गरेको कोरियाले दाबी गरेको थियो। तर अमेरिकाले उत्तर कोरियाको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको थियो। उत्तर कोरियाले प्रोपोगाण्डाका रुपमा जब अमेरिकी बन्दी सैनिकको फोटोशुट गर्यो र यो ऐतिहासि तस्वीर बन्य पुग्यो। यसमा आफ्नो इसारामा अमेरिकी सैनिकले आफ्नो विरोध जनाएका छन्।
न्यूयोर्कमा फ्रान्सिस गोल्डिनले आफ्नो ३० वर्षको उमेरमा प्राइड परेडमा भाग लिएकी थिइन्। उनले खुलेर समलिंगी सम्बन्धको समर्थन गरिन्। ९३ वर्षको उमेरमा फेरि फ्रांसिसले २०१६ मा गे प्राइड र्यालीमा भाग लिइन्। त्यो पनि ३० वर्षको उमेरकै जस्तो जोश र फूर्तीसाथ। उनका यी दुवै फोटो निकै चर्चित भए।
यो फोटोलाई फोटोग्राफर ह्यान्स रुनेसनले १९८५ मा खिचेका थिए। यो फोटोमा ड्यानुटा डेनियलसन नार्डिक रीच पार्टीको र्यालीमा एक नियो–नाजीमाथि आफ्नो व्यागले आक्रमण गरिरहेकी छन्। किनभने ड्युना की आमा नाजिहरुको कन्सेन्ट्रेशन क्याम्पको शिकार भएकी थिइन्।
८ अप्रिल २०१७ मा इंग्लिश डिफेन्स लीगले बर्मिंघममा एउटा प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो। यो क्रममा प्रेस एसोसियशनका जोए गिडेंसले फोटो खिचेका थिए। यो फोटोमा एक युवती प्रदर्शनकारीको आँखामा आँखा जुधाएर हेरिरहेकी छन्। उनको अनुहारको हाउ भाउ निकै प्रभावित पार्ने खालका छन्। यो फोटो विश्वमा धेरै चर्चित भयो।